Seranan-tsambon’i Toamasina : ivoahan’ny masonkarena lehibe amin’ny vidin’entana | NewsMada
Seranan-tsambon’i Toamasina : ivoahan’ny masonkarena lehibe amin’ny vidin’entana
Anarivony isan-taona ny sambo miditra eo amin’ny seranan-tsambon’i Taomasina, voalohany eto Madagasikara, ary mbola asiana fanitarana miaraka amin’ny Japoney. Ao Toamasina avokoa ny 75 hatramin’ny 80 % ny entana miditra sy mivoaka eto an-toerana. Volabe no mihodina amin’izany toerana izany.
Iantohan’ny Spat (Société de port autonome de Toamasina) tanteraka amin’izao fotoana izao ny fampihodinana ny seranan-tsambon’i Toamasina. Orinasa tsy miankina ny Spat eo amin’ny fomba fitantanana azy. Andraikitra voalohany iantohany amin’izany ny tsy hisian’ny loza ao anatin’ny faritry ny seranan-tsambo, araka izay fitaovana eo am-pelatanany. Mpiara-miombon’antoka amin’ny asa rehetra ny MICTSL (1), nanomboka ny 2005. Io ny misahana ny entam-barotra rehetra miditra sy mivoaka ao anaty kaontenera. Endriky fiaraha-miasa eo amin’ny tsy miankina sy ny fanjakana izany amin’ny alalan’ny Spat. Mpiara-miombon’antoka faharoa lehibe ny SMMC (2), nanomboka ny 2008, mampidina sy mampiakatra ireo entana tsy anaty kaotenera, toy ny fiara ; akoram-bokatra samihafa (nikela, kobalta, …), entam-barotra ( simenitra, siramamy, vary…)
Lanjan’entana, karazany, sokajiny
Ahitana ny masoivohon’ireo orinasa lehibe eto an-toerana koa ny ao amin’ny faritry ny seranan-tsambo, toy ny orinasa Ambatovy, Kraoma, Holcim, ireo mpivarotra solika rehetra eto amintsika (Total, Jovenna, Shell, Galana). Ao koa ny Gasynet, miandraikitra ny antontan-tsaratasy samihafa. Samy misy vola aloa avokoa amin’ireo sampana rehetra ireo, miankina amin’ny halehiben’ny sambo, fotoana hiantsonany eo amin’ny seranana, entana hoentiny, sns. Ankoatra ny vidin’entana avy any ivelany, ao ny masonkarena lehibe iray. Ny an’ny SMMC, ohatra, tsy maintsy amin’ny euro ny vola aloa aminy, araka ny tahan’ny fifanakalozana omen’ny Banky foibe. Miankina amin’ny lanjan’entana, karazany sy ny sokajiny ny vola aloa. Ireo rehetra ireo miampy ny an’ny fadintseranana.
Raha ny fanazavan’ny mpandraharaha mpanafatra entana, ao anatin’izany avokoa ny masonkarena, miampy ny fitaterana azy mankany an-dRenivohitra. Mety midina ny vidim-bokatra, ohatra, ny vary eo amin’ny tsena iraisam-pirenena fa ny ao amin’ny seranan-tsambo sy ny fitaterana izany eto an-toerana no mampiakatra azy tonga hatrany amin’ny mpanjifa. Mety ho toy izany koa ny solika, miampy izy io izay efa voadio avy any ivelany, mampitombo ny masonkarena.
Fampisehoana nataon’ny Spat, Toamasina.
MICTSL(1) : International Container Terminal Services Limited
SMMC(2) : Société de manutention des marchandises conventionnelles